Iran oo hakineysa heshiiskii Nukliyeerka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Iran oo hakineysa heshiiskii Nukliyeerka
Iran oo hakineysa heshiiskii Nukliyeerka
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani, ayaa maanta ku dhowaaqay in dalkiisa uu hakin doono u hoggaansanaanta mamnuucista kaydinta macdanta Uranium-ka iyo biyaha culus, taasi oo qeyb ka ahayd heshiiskii caalamiga ee sanadii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalkaas.
Heshiiskan oo Iran ay la gashay Britain, China, France, Russia, Mareykanka iyo Jarmalka, ayaa Iran ay ku ogolaatay inaysan keydsan wax ka badan 300 oo kilogram oo ah macdanta uranium-ka ee la cusleeyey ah.
Iran ayaa sidoo kale ogolaatay inaysan keydasan biyaha culus ee loo adeegsado warshadaha nukliyeerka.
Iran ayaa ogolaanshahan ku beddelatay in laga qafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, hase yeeshee Mareykanka ayaa dib usoo rogay cunaqabateyntaas, kadib markii madaxweyne Donald Trump uu heshiiska ka baxay.
Rouhani ayaa sheegay in dalalka kale ee qeybta ka ah heshiiska aysan kasoo bixin ballan-qaadyadooda islamarkaana ogolaadeen in xayiraadda Mareykanka ay saameyso saliidda Iran dhoofiso iyo bankiyadeeda.
Previous articleDiyaarad ku dhacday Wabi ku yaalla Mareykanka
Next articleJubaland oo sheegtay in 18 Shabaab lagu dilay duqeyn
Xukuumadda Nayrobi Oo Hargeys U Soo Dirtay Diblomaasiyiin Indho-Indhayneysa Somaliland
Madaxweynaha famaajo Oo Farriin Tacsi Ah U Diray Madaxweynaha Jabuuti, Cismaaciil...